Yuusuf Indhacadde Oo Talo Cajiib ah U soo jeediyey Dowladda farmaajo#aqriso | Xaqiiqonews
Yuusuf Indhacadde Oo Talo Cajiib ah U soo jeediyey Dowladda farmaajo#aqriso
Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde, ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada ay isku qabaan dadka shacabka ah iyo madaxda dowladda Federalka Somaliya ee illaalada faraha badan wadato.
Indha Cadde, ayaa sheegay si loo badbaadiyo dhibaato suuragal ay tahay inay soo gaarto dadka rayidka ah inay haboon tahay in madaxda dowladda Federalka Somaliya loo sameeyo wado gaar ah oo ay ka maraan Magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay illaalada gaadiidka kor ka saaran mar waliba inay ku jiraan feejignaan ku aadan naftooda iyo mida ay ilaalinayaan, wuxuuna sheegay in aanan la garan karin cida la iska ilaalinaayo, taasina ay tahay dhibaatada ugu weyn ee jirta.
Yuusuf Indha Cadde oo Wareysi siiyay Idaacada Simba ee Magaalada Muqdisho, ayaa talo ahaan u soo jeediyay si shacabka iyo madaxda dowladda ay u kala badbaadaan in la sameeyo wado gaar ah oo madaxda ay maraan.
“Runtii way adag tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka ilaaladda Madaxda Dowladda Somaliya ay u geystaan shacabka isticmaalaya wadooyinka,balse hadii la sameeyo wado u gaar ah ilaaladdda iyo madaxda Dowladda Somaliya xal ayaa la helayaa.”, ayuu yiri Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde.
General Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde, ayaa sheegay in illaaladiisa uu ku amray inaysan ridi karin xabad, sidoo kalena qal qal aysan ku abuuri karin dadka shacabka ah, balse mar kasta laga doonaayo inay feejignaadaan.
Dhacdadii lagu dilay Wasiirkii hawlaha guud ee Xukuumadda Somaliya Cabaas Siraaji ayaa noqotay mid aad loo hadal haayo, iyadoo ciidamada kala duwan ee dowladda hadda ay dareemeen culeyska ah in qori lagu taago gaari rayid ay saaran yihiin ama wadada iska maraayo.